Florentino Perez Oo Markii Ugu Horeysay Ka Hadlay Mustaqbalka Cristiano Ronaldo & Rabitaanka Xiddiga Ee Inuu Ka Tago Spain | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Europe » Florentino Perez Oo Markii Ugu Horeysay Ka Hadlay Mustaqbalka Cristiano Ronaldo & Rabitaanka Xiddiga Ee Inuu Ka Tago Spain
Florentino Perez Oo Markii Ugu Horeysay Ka Hadlay Mustaqbalka Cristiano Ronaldo & Rabitaanka Xiddiga Ee Inuu Ka Tago Spain
Madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa qorsheynaya inuu wadahadal la yeesho Cristiano Ronaldo si xal loogu helo mustaqbalka ciyaaryahanka.
Ronaldo ayaa doonaya inuu ka tago Spain waxaana uu xiiseynayaa suurtogalnimada uu dib ugu laaban karo Manchester United sida ay ogaatay Sky Sports isagoo ka careysan qaabkii ay u la dhaqmeen maamulka canshuuraha ee dalka Spain.
Perez ayaa xaqiijiyay inuusan jirin dalab laga soo gudbiyay Ronaldo ama ciyaaryahan kale oo Real Madrid ah, waxaana uu shaaca ka qaaday inuu xal raadin doono marka uu la hadlo ciyaaryahanka ka dib koobka Qaadaraha.
“Lama aanan hadlin Cristiano tan iyo finalkii Champions League” ayuu Perez u sheegay idaacada Isbaanishka ee Onda Cero. “Wax walba waxaan ka maqlay wargeysyada.
“Nolosha waxa ay ku siisaa dhibaatooyin lama filaan ah, waana qasab inaad xal raadiso.
“Midkoodna aniga ama Real Madrid maanka inoogama jirto in Cristiano uu ka tagi doono kooxda. Ronaldo waa uu ka awood badan yahay waana uu ka muhimsan yahay dhamaanteen halkaan joogta.”
Perez oo sidoo kale ku celiyay in qandaraaska Ronaldo lagu burburin karo HAL BILYAN YURO ayaa kalsooni ku qaba in kabtanka Portugal uusan wax danbi ah ku laheyd eedeymaha canshuur lunsiga ee loo soo jeediyay.
“Waan hubaa in Cristiano uu raacay dhamaan sharciyada canshuurta” ayuu yiri Perez. “Waxaa jira isfaham la’aan la kala cadeyn doono.
“Waxa kaliya ee aan ogahay ayaa ah in Cristiano uu ka careysan yahay sida ay u la dhaqmeen saxaafada.”